भ्याकुरको खेती अक्सर ६० देखि ७० ग्राम तौल भएको काटिएको गानोबाट गरिन्छ। कोपिलाहरू आएको गानोलाई बसन्त ऋतुमा ड्याङ्गमा लगेर सारिन्छ।यसको बीजबाट पनि विरुवा उमारी खेती गरिन्छ। विरुवाहरूलाई सार्नु अघि खेतलाई खनजोत गरि गाई गोरुको मल (१,००० के. जी. प्रति रोपनी ) हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि ड्याङ्गमा ६० से.मि.को फरकमा रोप्नु पर्दछ। गानोबाट लहराहरू पल्हाई आएपछि तिनलाई थाँक्रो दिनु अत्यन्त जरुरी छ। थाँक्रो दिन नर्कट , बाँसका चिरा , निगालो र अन्य काठका घोचाहरू काममा लगाउन सकिन्छ।
नयाँ डाँठको कलमीबाट पनि विरुवा उमारिन्छ। नेपालको निम्न लिखित जिल्लाहरूमा यसको खेती गर्न सकिन्छः काठमाडौं , ललितपुर , भक्तपुर , काभेपलान्चोक , नुवाकोट , रसुवा , सिन्धुपाल्चोक , मकवानपुर , गोर्खा , पाल्पा , दैलेख , जुम्ला , जाजरकोट आदि।
हरेक दोस्रो तथा चौथो वर्षमा कार्तिक देखि माघसम्ममा खनेर गानो झिकिन्छ। जंगलबाट संकलन गरिंदा एक पटक संकलन गरिसकेको क्षेत्रभित्र कम्तिमा २ वर्ष सम्म फेरि संकलन गर्नु हुंदैन , कारण पछि फेरि आँफै पल्हाएर आवोस् भनि संकलन गर्दा यसको गानोको केही भाग जमीन भित्रै छोड्नु अति जरुरी छ।
सुकाउने तथा संरक्षणसम्पादन
संकलन गरिएको गानोहरूमा टाँसिएको माटो हटाउन पानीमा पखालिन्छ। पछि टुक्रा टुक्रा गरी काटिन्छ र त्यसलाई घाम वा छहारीमा राम्ररी सुकाईन्छ। राम्ररी सुकिसकेका गानाका टुक्राहरूलाई बोरामा राम्ररी बाँधी ओभानो ठाउँमा राख्नु पर्दछ।
यो जुम्रा मार्न र माछा मार्ने विषको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रशोधन गरि प्राप्त हुने डायोस्जेनिनबाट स्टेरोयेड हरमोन्स गर्भ निरोधक चक्कि (औषधी) पनि निर्माण गरिन्छ। घाउ , खटिरा र तागतको औषधीमा पनि यो प्रयोग गरिन्छ। यसलाई पोलेर खाने पनि गर्दछन्।
विकिमिडिया कमन्समा Dioscorea सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन् ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भ्याकुर&oldid=421721" बाट निकालिएको
अन्तिम सम्पादन १६ अक्टोबर २०१४, ११:४१